Home » Copy/Paste » ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တိုက်ခိုက်သည့် စာများ ကော့မှူးတွင် ဖြန့်သွား
ဖားတုလို့ ခရုခုန် အိုင်ပျက်ရုံသာရှိတော့မပေါ့။ သူတို့ကင်းနိုင်တာလဲမဟုတ်ပဲနဲ့။ အခုကြံဖွတ်ကမဲဆွယ်နေတာ ဗိုလ်ချုပ်ပုံနဲ့နော်။ ဗိုလ်ချုပ်ကိုချစ်သူတိုင်း ပြည်ခိုင်ဖြိုး ကိုမဲပေးပါဆိုပဲ။ ဗိုလ်ချုပ်ကိုချစ်မှတော့ သူ့သမီးကိုပဲမဲပေးတော့မယ်ဆိုတာ ဖြုတ်ဦးနှောက်ကောင်တွေသိမှမသိပဲ။
အထက်က comment ပေးတဲ့ Thel Nu Aye ရေ
အင်းဂွကျလိုက်တာ။ ပြသနာက ကျွန်မတို့စိတ်ထဲမှာ ဗိုလ်ချုပ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ လွတ်လပ်ရေး ရဲ့ဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုပဲပြေးမြင်တာလေ။ YE YINT THU ပြောတဲ့ လူတစု ကိုးကွယ် တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တွေ ကိုကျွန်မတို့မှ အသိအမှတ်မပြုတာ။ လူတိုင်းကို ကျွန်မတို့လိုပဲ လို့မှတ် လို့ ကွန်မန့်မှာအပြည်မရေးလိုက်မိတာကျွန်မအမှားပါ။ YE YINT THU ပြောတဲ့ လူတစုကိုးကွယ် တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ပုံတွေနဲ့သုံးပြီးမဲဆွယ်တာဆိုရင် ဘာမှမပြောပါဘူး။ အခုဟာက ကျွန်မတို့ရင် ထဲ အသဲထဲကတန်ဖိုးထားတဲ့ လွတ်လပ်ရေး ရဲ့ဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံ ကိုမှခုတုန်း လုပ်ပြီး သူတို့ လိမ်နေတာကိုပြောတာ။ သူတို့မို့မရှက်တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံကိုသူတို့ မဲဆွယ်တဲ့ပိုစတာပေါ်မှာအကြီးကြီးတင်ထားတာ။
YE YINT THU ဆိုတဲ့ .. comment ပိုင်ရှင် ရေ…. စည်းကမ်း နံပါတ် ၉ ကို ဖတ်စေချင်ပါတယ်။
ဒီလိုလူမျိုးလဲ ရှိသေးတာပဲကိုး……… ခက်လိုက်တာနော်……… YE YINT THU ရေ စည်းကမ်းရှိပါကွယ်………
ဟိုကောင် YE YINT THU ….. မင်းကို ပြီးခဲ့တဲ့ 8 လလောက်က ကိုကြောင်ကြီးလား၊ ကိုဂျော်နီပုလားမသိဘူး…. သူတို့ထဲကတစ်ယောက်ယောက် _ဲ ခဲ့သလိုပဲပြောတော့မယ် ….. A လိုး B ပိုး C သခိုး …….
အင်းးးးးးးခက်တော့ ခက်နေပြီ …”ဗိုလ်ချုပ်” လို့ဆိုလိုက်တိုင်းလဲ မြန်မာနှိင်ငံရဲ့ဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလို့ သတ်မှတ်လို့မရဘူးလေ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ချစ်စနိူးနဲ့ အဖျားဆွတ်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်လို့ ခေါ်တာလူတိုင်းသိ
ဟားဟ ချကုန်ကြပီ၊ ချကြ ချကြမှ အမှန်တခုထွက်လာမယ်၊
အဲလိုပုတ်ခတ်တဲ့စာတွေ ဖြန့်လိုက်တော့ ဘယ်သူကယုံသွားကြလဲမသိဘူးနော်…
ဖြန့်ကြပါ။ လိမ်ကြပါ။ စစ်အစိုးရတုန်းက သူတို့ကို ပြန်ပြီး အဲဒီလို
လုပ်မယ်ဆို ရင် ဘယ်သူမှ မလွယ်ပါဘူး။ အခုလဲ အဲဒီကောင်တွေကို
ဇကောလောက်မှ ဇောက်မနက်တဲ့ ခြင်္သေ့ယောင်ဆောင်ထားတဲ့ ခွေးလေခွေးလင့်တွေပါလို့ပဲ
baby skyline says:
အောင်ပန်းမှာလည်း အမေစုကို ပုတ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့ စာတွေနဲ့ VCD ခွေတွေကို NLD ပါတီဝင်တွေရဲ့ အိမ်တံခါးပေါက်ဝတွေမှာ ညဖက်လူခြေတိတ်ချိန် လိုက်ပစ်နေတာ ၂ညဆက်တိုက် ရှိနေပြီ။
ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုသက်သေနှင့်တကွတင်ပြတိုင်ကြားလို့ရပါတယ်။ NLD လဲအဲလိုပဲ တိုင်နေတယ်ပြောတယ်။